Usuku Lokudla Lomhlaba wonke lwe-2019 - IZENZO ZETHU ZISEKHAYA-Inkampani News-Hunan Sunlight Bio-Tech Co, Ltd
Usuku Lokudla Lomhlaba 2019 - IZENZO ZETHU ZISEKHAYA
Ngabe uyazi ukuthi namuhla usuku lwakho! - 2019 Usuku Lokudla Lomhlaba wonke
Ukwenza konke ngokuhlanganyela emazweni angama-150 yilokho okwenza uSuku Lokudla Lomhlaba lube ngolunye lwezinsuku ezigujwa kakhulu ekhalendeni le-UN. Amakhulu emicimbi kanye nemisebenzi yokufinyelela kubantu ihlanganisa ohulumeni, amabhizinisi, ama-NGO, abezindaba, nomphakathi jikelele. Akhuthaza ukuqwashiswa komhlaba wonke kanye nokusebenza kwalabo abahlushwa yindlala nangesidingo sokuqinisekisa ukudla okusempilweni kwabo bonke. Yenza #WorldFoodDay usuku lwakho - wabelane ngesenzo sakho se- #ZeroHunger noma ujoyine ucingo ngokuthuthukisa umcimbi weqembu noma umsebenzi.
I-SQT ILANGA ligxile empilweni yabo bonke abantu
Yenza Umhlaba Ube Nempilo Futhi Ukukhanya kwelanga！
Emashumini eminyaka amuva nje, sikuguqule kakhulu indlela yethu yokudla nemikhuba yokudla ngenxa yomhlaba wonke, ukufudukela kwabantu emadolobheni kanye nokukhula kwemali engenayo.
Sisuke ezikhathini ezithile zonyaka, ikakhulu izitshalo ezisetshenziselwa izitshalo nokudla okune-fiber ezinokudla okuphezulu kokudla okukhonjisiwe, ushukela, amafutha, usawoti, ukudla okuqhutshwayo, inyama neminye imikhiqizo yomthombo wezilwane. Isikhathi esincane sisetshenziselwa ukupheka ukudla ekhaya, futhi abathengi, ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni, bancika kakhulu ezitolo ezinkulu, ezitolo ezithengisa ukudla okusheshayo, abathengisi bokudla basemgwaqweni kanye nezindawo zokudlela ezihamba nabo.
Inhlanganisela yokudla okungenampilo nezindlela zokuhlala phansi zithumele amazinga okukhuluphala akhuphuka, hhayi emazweni athuthukile kuphela, kodwa nakumazwe abahola kancane, lapho indlala nokukhuluphala kuvame ukuhlala khona. Manje bangaphezu kwezigidi ezingama-670 abantu abadala kanye namantombazane nabafana abayizigidi ezingama-120 (iminyaka emi-5 ukuya kwengama-19), abakhuluphele, futhi izingane ezingaphezu kwezigidi ezingama-40 ezingaphansi kweminyaka emi-5 zikhuluphele, kuyilapho abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-820 bebulawa yindlala.
Ukudla okungenampilo kuba yingozi ehamba phambili yokufa kwezifo ezingathathelanayo (ama-NCD), kufaka phakathi izifo zenhliziyo, isifo sikashukela kanye nomdlavuza othile. Okuxhumene nengxenye eyodwa yesihlanu yokushona emhlabeni wonke, imikhuba yokudla engenampilo nayo idonsa kanzima kwizabelomali zezempilo zikazwelonke ezibiza ama-USD 2 trillion ngonyaka.
Ukukhuluphala nezinye izindlela zokungondleki kuthinta cishe umuntu oyedwa kwabathathu. Ukuqagela kukhombisa ukuthi isibalo sizoba munye kwababili ngonyaka ka-2025. Izindaba ezimnandi ukuthi izisombululo ezingabizi zikhona ukuze kuncishiswe zonke izinhlobo zokungondleki, kepha zidinga ukuzibophezela okukhulu kanye nokwenza okuthile emhlabeni jikelele.
Okwedlule: Ucwaningo lweKhasimende lwe-2019 lweHunan Sunlight Bio-tech
Okulandelayo: Uyazi ukuthi luyini usuku lwanamuhla - Usuku Lwamanye Amazwe Lokuqeda Ubuphofu